Blog Action Day: rano sy solika | Martech Zone
Alatsinainy Oktobra 15, 2007 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
Tsy mpiaro ny tontolo iainana aho. Izaho koa tsy mpanohana ny "Ny fahamarinana tsy mifanaraka". ny ahiahiana ny angona ary heveriko fa ny fireharehan'ny olombelona no mino fa mamono ny tany amin'ny fomba ratsy. Tsy sahirana ny Tany… olona izay.
Te-hitondra fiara elektrika aho, saingy fantatro fa tsy mahomby izy ireo ary amin'ny farany, mandoro solika fôsily. Te-hitondra fiara mampiasa solika hafa aho, saingy fantatro fa tsy mahomby ny fanaovana izany solika izany ary… mandrehitra lasantsy fosily. Angamba safiotra no valiny tsara indrindra, saingy miahiahy momba ny alehan'ny bateria sy ny ranoka manimba aho.
Tsapako fa ny fiavonavonantsika koa dia miteraka fifandonana eran-tany, olan'ny fahasalamana ary krizy angovo rehefa azo ialana izany. Te-handeha ivelany aho ary maimbo rivotra madio. Te-ho afaka hitsidika ny tendrombohitra aho fa tsy hahita fako. Te hahita anao handany vola kely amin'ny fanadiovana aho. Ary mazava ho azy, tiako ny hampihenan'ny Etazonia ny fiankinan-doha amin'ny solika sy ireo firenena Arabo.
Raha hanao an'izany dia anjarako ny manova zavatra. Milaza ny olona fa manomboka ao an-trano daholo ny politika. Mety hihaika aho fa ny trano fitehirizana angovo rehetra dia manomboka ao an-trano. Ny vola lany amin'ny tavoahangy plastika, ny fanotofana tany ary ny angovo dia very maina fotsiny ary izany no mahatonga ny bandy mpandala ny nentin-drazana toa ahy te-hanohana 'maintso'.
Amin'ny maha-olona tia ny any ivelany ahy, tsy tiako ny mahita fako sy fako manala ny hakanton'ny natiora eto amin'ny firenentsika. Tsy tiako ihany koa ny mahita antsika tsy maintsy miady amin'ny ady mba hahavelona ny fihinanana solika antsika.
Fa ahoana no hahitako fiovana? Ireto misy zavatra telo azoko atao (ary azonao atao koa!):
Aza mividy rano tavoahangy intsony. Mividy tranga ao an-trano aho ary mahita ny fako afaka mameno haingana sy haingana kokoa. Handeha any amin'ny serivisy an-trano aho izay anaterana ny rano anaty siny azo ampiasaina. Matahotra aho fa tsy afaka mihetsika hantsaka rano, maimbo ary mamela harafesina amin'ny zava-drehetra ny rano ao amin'ny tanànako.
Handeha hiantsena eo amin'ny tsenan'ny tantsaha eo an-toerana aho. Fantatrao ve fa ny legioma na voankazo antonony dia mandeha 1,800 kilaometatra mankany amin'ny loviao? (Loharano: Toekarena lalina). Ny fitaterana toeram-pambolena mankany amin'ny canneries na ny fonosana fonosana, avy eo mankany amin'ny supermarket, dia mpanjifa lehibe solika eto amintsika. Ary maharary ny tantsaha izany satria tapaka ny vidin'ny fitaterana. Tohano ny tsenan'ny tantsaha eo an-toerana dia mahazo vola bebe kokoa izy ireo ary tsy mampiasa solika firy izahay!
Amboary ny thermometer anao ary avelao 5 degre bebe kokoa amin'ny lafiny roa - na mafana na mangatsiaka. Fa maninona no mila aircon na hafanana be loatra? Ovao ny fitafianao ao anatiny mba hanomezana fampiononana anao… aza mampiasa angovo bebe kokoa.
Hanomboka anio aho. Manantena aho fa hanao izany koa ianao!
Tags: Toerana fivarotana Comcashvaliny mailakaOptimizationharona fiantsenanafandaozana sarety fiantsenanaandalana foto-kevitrawp_posts
15 Okt 2007 amin'ny 2:39 PM
Lahatsoratra tsara, Doug. Izaho dia mpino foana ny manao izay AZONAO fa tsy miala sasatra. Mividy vaovao foana aho rehefa afaka b / c mahasalama kokoa, manohana ny tantsaha / toekarena eo an-toerana ary tsy nieritreritra akory ny hampihena ny fitaterana. Nifindra tamin'ny siny Brita aho fa tsy tavoahangy rano, mora vidy kokoa noho ny serivisy an-trano ary tsy mila miahiahy momba ny fandefasana ianao. Ovao fotsiny ny sivana anao isaky ny roa volana ary tadidio ny hameno ny siny rano alohan'ny hivoahany. Mila minitra vitsivitsy hanivanana.
Mampiasa jiro mahomby amin'ny angovo koa aho. Raha vao nifindra tany amin'ireo takamoa ireo aho dia nilaza ny tatitra sy ny olona fantatro fa mampiasa azy ireo fa hampihena dolara vitsivitsy amin'ny faktioranao herinaratra isan-taona izy ireo ARY tsara kokoa ho an'ny tontolo iainana b / c fa tsy ny fako no vokarina amin'ny fanovana takamoa ary tsy mampiasa angovo firy izy ireo.
Misaotra amin'ny fampahatsiahivana.